Bee Products: Superfoods Original The
The shinni malab kuwa is-hoosaysiiya ayaa ka mid ah noolaha ugu muhiimsan ee dabiiciga ah ee. Bees waa mid muhiim u ah wax soo saarka ee cuntada in aan aadanuhu cuno, sababtoo ah waxay u rimiyaan dhirta sida ay ka ubaxa soo ururin nectar. Haddii aan bees waxaan lahaa waqti adag kordhaya badan oo ka mid ah cuntada.
Waxaa intaa dheer in aad na caawinaya baahida our beeraha, bees ka dhigi wax soo saarka badan oo aan guran karaa iyo sida loo isticmaalo. Qof ayaa lagu soo ururinta iyo iyaga oo isticmaalaya for tobankii iyo iyaga oo isticmaalaya cunto, iidaan, iyo daawo. Maanta, sayniska casriga ah waxaa ay kor u qaadaan waxa aannu had iyo jeer loo yaqaan, alaabta shinida leeyihiin qiimo daawooyinka iyo nafaqada weyn.
Honey waa wax soo saarka ugu horeysay oo inta badan iska cad in soo dhaca maskaxdooda markii fekerayo alaabta shinida. Waa sahlan loo heli karo dukaamada cuntada iyo dad badan oo u isticmaal sida macaaneeye meel oo sonkor ah la safeeyey. Honey waa cunto ah in bees ka dhigi by nectar ka soo ubaxa ururinta. Bay u noqon nectar galay malab by it regurgitating iyo daynin waxa uumi in ay xooga saarto sonkor ah uu ka samaysan waxyaabaha hoose. Waxa intaa dheer in sonkorta, malab ku jira xaddi raad vitamins, minerals, fiber, protein, iyo waxyaabaha kale.
dhadhan The malab waa kala duwan oo fiican in sonkorta kale. Laakiin faa'iidooyinka malabka ee ilaa hadda laga gudbo dhadhan iyo macaan. Honey leedahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan, labada sida wax aad cuni kartaa iyo sida daawada la mariyo. La soco, si kastaba ha ahaatee, in malab ah oo aad u isticmaali waa in ay ahaataa mid ceedhin ah oo aan la isticmaalin.
Antioksidanter . Honey waa hodan ku antioksidanter, kaas oo kaa caawin in lagu kabo dhaawac sameeyaa si jirkeena by sunta deegaanka. The madow malab ah, ku antioksidanter more joogo waxa ku jira.
Gargaarka xasaasiyadda . Malab ceeriin iyo isticmaalin ka kooban yahay xasaasiyadda ka ah deegaanka, oo ay ku jiraan dhirta budada, caaryada, iyo ciidda. Haddii aad cunto yar oo malab unfiltered in la soo saaray ee agtaada ah maalin kasta, waxaad ka heli doontaa in aad gargaar ka astaamaha xasaasiyadda aad hesho. By keeneysa in la xasaasiyadda aad dhiso difaac dabiici ah iyaga.
Caafimaadka dheefshiidka . Honey ayaa la sheegay inay wanaajiyaan dheefshiidka laba siyaabood. In mareenka caloosha iyo mindhicirka sare guryaha bakteeriyada malab u yarayn karaa heerarka Bakteeriyada keenta boogaha. In malab xiidanka bixisaa fogaado si loo caawiyo dheefshiidka.
Wanaajinta nabarrada . Sida cadar ah oo la mariyo, malab waxaa loo isticmaali karaa in lagu daweeyo boogaha. Waxay leedahay saamayn antibiotic oo xajiya boogaha nadiif ah si ay u si dhakhso ah bogsiin kara.
Saamaynta anti-bararka. Caabuq ba'an waa qayb caadi ah ee caafimaad leh, laakiin fasalka hooseeyo, caabuq chronic in dhib aad u badan oo Maraykan ah ay sabab u tahay cunto xumo waa waxyeello. Honey waxaa loo yaqaan si loo yareeyo bararka joogtada ah ee halbowlayaasha oo wax ka tarta cudurrada wadnaha. Waxa kale oo ay degto saamiga u dhexeeya kolestaroolka wanaagsan iyo kuwa xun.
Qufac xakamaynta. Marka xigta aad qabtid hargab ah ku dar qaado oo malab ah in ay koob shaah ah oo kulul. Honey lagu cabudhibayo qufac iyo sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah caddayn in laga yaabaa in ay kaa caawin in ay bogsiiyaan kuwa qabow ah iyo in la yareeyo muddada.
Nooca 2-Diabetes. Waayo, dadka qaba sonkorowga Nooca 2-, waxaa muhiim ah in aan daadad dhiiga sonkorta. Honey la sii daayo si tartiib ah dhiiga badan oo sonkor ah la safeeyey, taas oo doorashada ka wanaagsan dadka sonkorowga qaba ka dhigaa.
Bee manka waxaa laga malab kala duwan. Waa manka in bees soo ururiyay ka ubaxyo iyo buuxiyey galay dhagaxyada yar. Waayo, bees ah, kubadaha manka waxaa lagu keydiyaa rugta ah oo loo isticmaalo sida il of protein. Sida ay alaabahooda manka galay qaybaha kale ee rugta waxaa lagu daray in ay ka mid yihiin falgalka ka shinnida ee candhuufta, bakteeriyada, iyo dheecaanka miraha.
Waayo aadanuhu, manka shinnida uu yahay quwad ah ee nafaqada iyo waxaa jira sababo badan oo loo isticmaalo sida qayb ka mid ah cuntada caadiga ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in manka shinnida waa inaan laga helin alaabooyinka kale ee shinnida sida malab oo jelly boqornimada. Sidoo kale iska jira waxyaabaha manka shinnida leh lagu daro. Hadalladaasu ma aha kuwa wax soo saarka dabiiciga ah iyo xitaa waxaa laga yaabaa in waxyeello.
Nafaqo dhamaystiran. Bee manka ku jira oo dhan oo ah nafaqooyinka aan aadanuhu u baahan yihiin in ay u dhagaxyada yar. Waxay leedahay protein, carbohydrates, baruurta, antioksidanter, vitamins, iyo macdanta. Waa cunto dhamaystiran.
Control Weight. Bee manka ayaa la helay si loo caawiyo dadka ay lumiyaan iyo maarayn miisaanka marka loo isticmaalo oo dheeraad ku ah cunto caafimaad leh iyo jimicsi joogto ah. Waxaa ku caawin kara by madadaalo u-shiid jidhka oo ay u.
Caafimaadka dheefshiidka. Cilmi baaris ayaa muujisay in cunista manka shinnida hagaajin karaa caafimaadka dheefshiidka. Tan waxaa loo sharxay laga yaabaa by xaqiiqada ah in uu ka kooban fiber iyo sidoo kale fogaado.
Dhiig. Bukaanka dhiig siiyey manka shinnida la kulmay koror ah ee unugyada dhiigga cas ee dhiigga. Maxay tani ka dhacay aan la fahamsan yahay, laakiin dheeri manka shinnida u muuqataa in ay caawiyaan dadka qaba dhiig yari.
Heerka kolestaroolka dhiiggaaga. Manka Bee oo dheeraad ku ah ayaa sidoo kale lagu ogaaday in ay sharciyaynta heerka kolestaroolka dhiiggaaga ku jirta. Waxay keentaa heerarka kolesteroolka wanaagsan (HDL) tegin, halka heerka kolestaroolka xun (LDL) hoos ugu dhaadhaca.
Ka hortagga kansarka. In waxbarashada jireen jiirarkii, manka shinnida ee cuntada hortagi formation of burooyinka.
Socdeyba. Daraasado badan oo ay muujiyeen in manka shinni ku kordhinaya gaabis ah ee geedi socodka gabowga qaarkood. Waxa ay u muuqataa si kor loogu qaado xasuusta, kicin shiid, wadnaha iyo halbowlayaasha xoojiyo, iyo waxay bixisaa nafaqooyinka in dad badan ka maqan sida ay sii gabowdid.
Ma aha in lagu qaldo malab, oo cunto siiya bees shaqaalaha, jelly boqornimada waa cuntadii shinnida Boqorad, iyo sidoo kale dirxiga ee gumeysi ah. jelly Royal waa mid ka mid ah arrimaha ay mas'uul ka bedel unug a boqorad ah halkii shinnida shaqaale ah oo wuxuu galay. Halabuurka The of jelly boqornimada waxaa ka mid ah biyaha, protein, sonkorta, in yar oo ah baruurta, vitamins, antioksidanter, arrimo antibiotic, macdanta raad, iyo ensaymes. Waxa kale oo ka mid ah xarunta lagu magacaabo acid shinni boqoradda, oo cilmi ayaa baaraya, kaas oo la rumeysan yahay in ay fure u ekaysiinaya ah shinni malab caadiga Boqorad galay.
Daryeelka maqaarka. Jelly Royal in qaar ka mid ah waxyaabaha quruxda la mariyo waxaa laga heli karaa, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay caawiso ilaaliyo maqaarka ka soo qorraxda. Waxaa xitaa sixi kartaa qaar ka mid ah dhibaatada ay horay u sababa qorraxda, oo ay ku jiraan dib u soo celinta collagen iyo yaraynta aragti ah ee baro cawlan.
Cholesterol. Sida la barwaaqaysan malabka iyo manka shinnida labadaba, baabbi'iya jelly boqornimada ayaa la sheegay in ay miisaamaan baxay kolestaroolka wanaagsan iyo kuwa xun ee dhiiga.
Guryaha Anti-buro. Cilmi baarisyada qaarkood ayaa muujiyey in jelly boqornimada, marka lagu mudaa unugyada kansarka, hakin kartaa koritaanka burooyinka.
Caafimaadka taranka. Taageerayaasha Qaar ka mid ah jelly boqornimada odhan loo hagaajin karo bacriminta naag iyo xataa nooleeyaan calaamadaha PMS.
Caafimaadka dheefshiidka. Jelly Royal waxaa sidoo kale loo yaqaan in ay awoodaan in dejiyo tiro ka mid ah xaaladaha caloosha ka boogaha in saxarada si calool.
Kale Products Bee
malab cayriin, organic, oo aan la isticmaalin, manka shinnida, oo jelly boqornimada waa dhan fudud si aad u hesho at aad dukaanka caafimaadka jecel, ama si fiican weli, beekeeper a degaanka. Waxaa jira waxyaabo kale oo dhowr by bees ee rugta ka dhigay in ay yihiin iyo sidoo kale ma bartay iyo kuwa aan sida fudud si aad u hesho gacmahaaga on. Propolis, tusaale ahaan, waa wax resinous in bees ka dhigi laga dheecaan iyo taas oo ay u isticmaalaan in ay xir dildilaaca yar yar iyo godad ee rugta ah.
Waayo aadanuhu, propolis waxaa loo isticmaali karaa in codsiyada la mariyo. Ma aha wax soo saarka cuntada nafaqada, inkasta oo waxa loo isticmaali karaa si ay u sameeyaan xanjo. Propolis leeyahay sifooyin bakteeriyada ayaa muddo dheer loo isticmaalo sida xal la mariyo ee boogaha, finanka, iyo finanka maqaarka. caddayn Limited waxay muujinaysaa in waxa ay sidoo kale kaa caawin kartaa in lagu daweeyo herpes, cudurada ilkaha, iyo cudurada bararka. Caddeynta ma aha gabagabo ah, laakiin propolis waa ammaan in la isticmaalo.
Beeswax waa shay dufan ah in bees u isticmaalaan si ay kor u bulk of shanlooyinka malab ay. Ma aha la cuni karo ee dareenka ah in ay tahay in ay adag dheefshiido. Ma aha sun ah, laakiin ma waxaad ka heli doontaa nafaqada badan waxaa ka mid ah haddii aad isku daydo inaad ku cuntaan. Waa maxay waxa ay u fiican tahay sameynayo dabiiciga ah la isku qurxiyo, saabuunta, kareemada, iyo shumaca waa.
Isticmaalka Bee Products in smoothies
Honey, manka shinnida, oo jelly reer boqor oo dhan lagu dari karaa si smoothies aad. Waxa ugu weyn oo ku saabsan manka shinni badan iyo malab waa in ay dhadhan fiican iyo sidoo kale idin siinayo faa'iidooyin caafimaad oo cajiib ah. Bee manka ma aha macaanaa sida malab, laakiin waxay leeyihiin dhadhan fiican. Waa cunto hodan ah, sidaa daraadeed waxa uu si tartiib ah bandhigo. Ka bilow ah miraha dhowr waqti iyo si tartiib tartiib ah u kordhi xaddiga aad isticmaasho inta u dhaxaysa hal qaado oo mid ka mid ah qaado oo halkii smoothie. Isku day qasayso manka shinnida macaan iyo rusheeyo on top sida Rusheeyaha on jalaato. Maxaa yeelay, dhammaan Cuntadani smoothie soo bandhigtay manka shinnida, riix xiriirka hoose.
Bee smoothies manka
Waxaad ku dari kartaa malab si deeqsinimo ah in smoothies aad meel of macaaneeye kale oo kasta oo aad isticmaashid. Waxaa si fiican u guursado oo dhan dhadhan kale, laakiin sidoo kale ku iftiimin karaa on gaar ah. Had iyo jeer raadiyo malab organic iyo ceeriin iyo haddii aad ka heli kartaa wax soo saarka sameeyey degaanka, in xataa si fiican. Hubi suuqa beeralay dhow ee malab ah degaanka.
dhadhan The of jelly boqornimada aan racfaan qof kasta. Waxay noqon kartaa macaan, iyo sida qaar ka mid ah soo tilmaama, in yar fishy. Warka wanaagsani waa in aad u baahan tahay oo keliya in yar oo ka mid ah (oo ku saabsan shaaha halkii smoothie) si aad u hesho faa'iidooyin caafimaad oo aad u qarin karaan in aad smoothie la dhadhan xoogan. Dhab ahaantii, isku day in aad u isagaoo malab si ay u qariyaan dhadhan ah.
waxyaabaha Bee waa cajiib for content nafaqo iyo awoodda jidhka aadanaha bogsiiyo in tiro ka mid ah siyaabaha. Had iyo jeer ka taxaddartaa marka la isticmaalayo alaabta, kuwaas oo haddii aad tahay bees xasaasiyad ama aad ka shakisan tahay. Inkasta oo dhif ah, haddii aad ku caaroonayso qaniinka shinada, mid ka mid ah waxyaabaha shinnida waxay kuu keeni kartaa in ay dareen-celin iyo sidoo.
Waa maxay waayo-aragnimo oo leh alaabta shinida? Ma leedahay jecel? Fadlan ha u sheegin by tegaayo a comment hoos.
waqti Post: Dec-13-2016
Fakis: 0086 574 87897189
Maxaad ka ogtahay Berb ...
Waa maxay Berberine? Berberine waa cusbo qubeys ammonium ah oo ka socota kooxda protoberberine ee benzylisoquinoline al ...
Maxaad ka ogtahay wax ku saabsan St.J ...
[Waa maxay wortka John's wort] St. John's wort (Hypericum perforatum) wuxuu leeyahay taariikh adeegsi ahaan daawo ahaan ilaa ...
© Copyright - 2016-2017: Dhamaan Reserved Rights. - Power by Globalso.com